Gaanaafi Iyvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfachuuf Dilbata dirree seenu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Gaanaafi Iyvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfachuuf Dilbata dirree seenu
Ekuwaatooriyaal Giiniifi Morokoon adabaman
Jalqabaa kaasee waancaaf nidhihaatan jedhamanii kanneen eeggaman keessa jiru Gaanaafi Iyvoorikoost. Tilmaamni taajjabdootaafi beektota kubbaa miilaa dhugaa ta’ee kunoo gareen lamaanuu morkattoota isaanii hunda duubatti gatanii waancaaf dabraniiru.
Gareen Iyvoorikoost morkataa isaa DR Koongoo 3 – 1n injifachuudhaan wancaaf dorgomaa ta’uu isa kan mirkaneesse. Gareen Iyvoorikoost tapha kana irratti dursa kan fudhate goolii Yaayaa Tureetiin ture. Gooliin isaa goolii Mbookaniin Koongoof galcheen haqamtus, gareen isaa goolii 2 gara boodaa Jerviinihooniifi Kanoon laakkofsiisaniin injifatee bahuu danda’eera. Gareen Iyvoorikoost Dilbata dhufu injifate taanaan bara 1992 as yeroo jalqabaataafi kan waancaa Aafrikkaa harkatti galfatu.
GaanaaN, akkuma Iyvoorikoost, carraa CAF 30ffaa bara kanaa injifachuu 50% qabdi. Gaanaan biyya geeba bara 2015 qopheesite Ekuwaatooriyaal Giinii 3 – 0n injifatteeti kan waancaaf dhihaatte.
Gareen Ekuwaatooriyaal Giinii bifa nama hunda raajeen sadarkaa kana gayus dhuma irratti deeggartoonni ifi daawwattoonni gareen biyyattii fundura isaaniittii Gaanaadhaan 3 – 0n injifatamuun kan isaaniif hinliqimfame ture. Deggartoonni istaadiyomii keessa turan jeequmsa kaasuudhaan taphni daqiiqaa 30f akka addaan citu taasisaniiru. Heekkarri ka’e madaayiinsa deeggartoota Gaanaa 36f sababa ta’eera. Kanniin keessaa 14 hospitaalatti yaalamuudhaaf dirqamaniiru. Deegartoota garee biyyatti kan seera qabsiisuu dadhabde Ekuwaatooriyaal Giniin adabbiin doolaara 100,000 CAF irraa itti gatameera.
Oduu gama bulchiinsa CAF irraa baheen Morokoon, biyyi silaa waancaa bara kanaa keessummeessuun irra ture, soda Iboolaa akka sababaatti eeruudhaan kopheessuu waan diddeef adabbiin irra kaayameera. Morokoon, akka ibsa CAFitti, kana booda si’a lamaaf ( 31ffaa fi 32ffaa) waancaa biyyoota Aafrikaa irratti hinhirmaattu. Kana irraan doolaara Ameerikaa miliyoona 9 akka kafaltus itti murtaayeera.
garee gaanaafi iyvoorikoost
waancaa aafrikaa 30ffaa
Previous articleAmaloota yeroo heddu dureessaafi hiyyeessa irraa calaqqisan
Next articleAabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane